रोशी गाउँपालिकाको आफ्नै भवन बन्ने ! यस्तो छ ४४ औँ कार्यपालिकाको निर्णय – Radio Roshi
रोशी गाउँपालिकाको आफ्नै भवन बन्ने ! यस्तो छ ४४ औँ कार्यपालिकाको निर्णय
in रोशी खबर / स्थानीय तह — by Roshikhabar —	March 20, 2020
यश कुमार परियार-चैत्र ७,
जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाले अब आफ्नै भवन निर्माण गर्ने भएको छ । आज गाउँपालिका अध्यक्ष दल बहादुर (डि.बि.) लामाको अध्यक्षतामा बसेको ४४ औँ कार्यपालिका बैठकले आफ्नै भवन निर्माण गरी सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । भवन निर्माणका लागि रोशी गाउँपालिका वडा नं ७, साविक कालिन्चोक वडा नं ३ मा रहेको १० देखि १३ रोपनी जग्गा निःशुल्क रुपमा दिने जग्गावालाले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । जग्गा प्राप्त हुना साथ सोहि स्थानमा गाउँपालिकाको भवन निर्माण गरिने बताईएको छ । त्यसका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रकम माग गरीने प्रवक्ता पदम बहादुर लामाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले हाल कटुञ्जेवेशीमा भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आईरहेको छ ।
त्यस्तै बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना (कोभिड–१९) भाईरस न्युनिकरण गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीद तथा अन्य अत्यावश्यकीय कार्यको लागि विपद व्यवस्थापन कोषमा रु १० लाख थप गरेको छ । साथै बैठकले वडा नं ७ सिंहालेमा खोप केन्द्र भवन निर्माण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सोहि बैठकले भकारो सुधार, माछा र मौरी पालनको लागि वडा कार्यलयमा फारम भरेका कृष्क छनौट गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । जसमा भकारो सुधार कार्यक्रमका लागि २५ जना, माछा पालनका लागि २ जना र मौरी पालनका लागि १० जना छनौट गरीने प्रवक्ता लामाले जानकारी दिए ।